Isixazululo - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
I-Weyer PA6 noma i-PA12 conduits nokufakwa kwayo okuhlobene nayo i-WQG, WQGM, WQGDM kusetshenziswa kakhulu embonini yezitimela. Le mikhiqizo inezinto ezinhle zokulwa nomlilo, ngaphandle kwe-halogen, i-phosphor ne-cadmium. Banikezwe isitifiketi sendlela yomlilo nentuthu yaseYurophu nakwamanye amazwe, i-EN45545-2, R22 / R23.
Enye yezimakethe zethu eziyinhloko ikheshi. Kule minyaka, imboni yekheshi ikhule ngokushesha. Izindlala zekhebula ze-Weyer nezilinganisi ezifanele futhi ezijwayelekile zidlala indima yokuvikela kule mboni. Kunokulwa nomlilo, ukuguga okulwa nokushisa, kune-IP68 enhle noma ukuvikelwa kwe-IP69k. Sizuze idumela eliphakeme kusuka kumakhasimende e-elevator ekhaya nakwamanye amazwe.
Izimoto Ezintsha Zamandla
Eminyakeni emihlanu eyedlule, izimoto ezintsha zamandla zasakazwa kabanzi eChina. Sisize lawo makhasimende aklama isixazululo sonke sokuvikela. Izindlala zekhebula ze-Weyer ezikhethekile ze-EMC nezixhumi ze-M23 zamukelwa futhi zasetshenziswa ngokuphelele. Manje sisabamba iqhaza ekwakheni iphrojekthi yomhlaba wonke yale ndawo.
Amandla avuselelekayo asetshenziswa kakhulu emhlabeni, iphrojekthi yamandla omoya icela isixazululo esikhulu sokuvikela. I-Weyer high tubing stress tubing kanye nezindlala zekhebula zingahlangabezana nezinga elifanayo lephrojekthi. Imijikelezo yethu, izindlala zifakwe ku-generator, ibhokisi lokulawula izinga lokushisa, isihambeli sejubane eliguqukayo nomzimba wombhoshongo.
Uhlelo lokuvikela i-Weyer njengamakhondomu kanye nazo zonke izinhlobo zezixhumi ezifakiwe zivikela uhlobo ngalunye lomshini kule mboni. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ePort Facility, umshini kagwayi, umshini wokujova, umshini wokukhanda, nethuluzi lomshini njll.
Ukukhanyisa kwezimboni nakho kuyimboni yethu ebalulekile esibandakanyeka kuyo. Imikhiqizo yakwa-Weyer yanelisa amakhasimende ethu amaningi ezindaweni ezahlukahlukene zokusebenzisa i-Lighting. Sidizayine imikhiqizo ekhethekile enjengezinga lokushisa eliphakeme nezindlala, imikhiqizo elwa nomlilo i-V0 kanye nezilimo zokuguga ezishisayo ngokwe-OC / T29106 ejwayelekile
Uhlelo lokuvikela i-Weyer alusetshenziswanga kuphela ezindaweni zokuhlangana zikagesi, kepha futhi kulayini wokukhiqiza othomathikhi namarobhothi. Ububanzi obugcwele bamakhondomu nezixhumi bangahlangabezana nezidingo zomkhakha ngamunye. Izindlala zethu zidlule isitifiketi se-ATEX ne-IECEx sendawo eyingozi.
Manje yisikhathi se-5G. Sigcina izikhathi. Izicubu ze-Weyer polyamide nezindlala zomoya zingahlangabezana nezidingo zamaphrojekthi wokuxhumana. Izikhala zethu zingagcina ukugeleza komoya okuphezulu ukulinganisa umoya oshisayo nomoya obandayo ngaphakathi noma ngaphandle kwebhokisi futhi kungavikela izintambo ekulweni namanzi nothuli (IP67).